Barsha man pun – जनदिशा
Tag: Barsha man pun
जनयुद्ध : घाइतेलाई जिउन गारो, कमान्डर वर्षमानलाई माला प्यारो !
janadisha December 18, 2018	No Comments Barsha man punjalajala samskritik pariwarmalaprabhu saha
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन केही न केही फण्डा चलाएर चर्चामा आइरहन्छन् । पछिल्लो पटक उनि २ सय २ किलो माला प्रकरणका कारण यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमहरुमा चर्चामा छन् । पछिल्लो समय जलस्रोतको उपयोगबारे पनि उल्लेख्य काम केही भएका छैनन् तर पनि मन्त्री वर्षमान पुन आफ्नो तौलभन्दा धेरै गुणा…
View More जनयुद्ध : घाइतेलाई जिउन गारो, कमान्डर वर्षमानलाई माला प्यारो !
गिजोलिएको बुढीगण्डकी र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप
जनदिशा October 5, 2018	No Comments Barsha man punkp oliurja mantralayaबुढीगण्डकी
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पछिल्लो निर्णयपछि मुलुकमा एउटा ठूलै तरङ्ग आएको छ । यो तरङ्गबाट मन्त्रिपरिषद् समेत अछुतो रहन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको इच्छाविपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हस्तक्षेपबाट बुढीगण्डकी परियोजना गेजुवालाई दिइएपछि सरकार पुनर्गठन हुने सम्भावना बढेको बताइन्छ । जनार्दन शर्मा ऊर्जा…
View More गिजोलिएको बुढीगण्डकी र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप
ऊर्जामन्त्रीको ‘नौटंकी’ !
Yogesh Khapangi August 16, 2018	No Comments Barsha man punelectricityNepal-Bangladesh
लोडसेडिङको मारबाट गुज्रिरहेको नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने भनेर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मिडियाबाजी गरे । देशभित्र भइरहेको विद्युतको माग सामान्य रुपमा आपूर्ति गर्न नसकेर नेपालले भारतबाट खरीद गर्दै आएको छ । तर, नेपालका ऊर्जा मन्त्रीले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बंगलादेश निर्यात गर्न पुग्ने विद्युत उत्पादन…
View More ऊर्जामन्त्रीको ‘नौटंकी’ !